Minetest 5.4.0: kuburitswa nenhau dzevadi veMODs | Linux Vakapindwa muropa
minetest ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi voxel mutambo injini iyo yakafuridzirwa neyekutanga yeSweden vhidhiyo mutambo weMinecraft. Iri kuramba ichikura uye kuomarara nguva dzese, iine kuvandudzwa kwakawanda kwakabatanidzwa mushanduro dzichangoburwa, senge Minetest 5.4.0.
Uyu shanduro nyowani Iyo yatove neyakafanirwa vhezheni, uye kuburitswa kwayo kunotarisirwa munguva pfupi. Vagadziri vayo vanoda rubatsiro, asi kwete rubatsiro rwakaomesesa, asi vatambi kuti vaiyedze kuti vaone kana ichishanda nemazvo uye kuchenesa matambudziko ese angangove naMinetest 5.4.0 isati yasunungurwa.
Saka kana iwe uchida kubatsira, dhawunirodha mutambo uye woedze. Uye zvakare, ine zvimwe zvakakosha zvakanyanya kugadzirisa. Une chokwadi chekuziva kuti kubvira 2019 pakaburitswa Minetest 5.0, in-mutambo mushandisi interface yakawedzerwa kuti ikwanise kurodha pasi uye wedzera maMOD kumutambo uye nekudaro kuwedzera kugona kwayo. Zvishoma nezvishoma ivo vakagadziridzwa, asi yaive nehumwe hunyoro hwaifanira kukwidziridzwa.
Kana imwe MOD ichida imwe, uye iyi inoda imwe, zvichingodaro. Chinhu chisina kugadzikana kune vatambi vanoishandisa. Asi kutsamwa uku kuchasara neshanduro iyi nyowani, saka izvozvi kudhanilodha Mod nyowani iri nyore neiyi interface. Iye zvino zvave nyore uye zvinobudirira, zvichigadzirisa maitiro kuitira kuti iwe ungonetseke nezvekunakidzwa.
Uye zvakare, ivo vakaverengerwa kumwe kunatsurudzwa, Semuyenzaniso:
Mouse inodzora pane yayo interface yakagadziridzwa.
Semi-yakajeka mamiriro akawedzerwa kumateki eID, saka haikanganise iyo kumashure senge yaimboita.
Mapgen Flat ikozvino inobvumira kuwedzera mapako, kunyange yakaremara nekutadza.
Kune zvakare kuvandudzwa kwekumodhita senge zvataurwa, kururamisa kwembugs uye kusagadzikana kwakabata chengetedzo, uye zvimwe shanduko muChidimbuDB ...
Iwe unoziva, kana iwe uchida kubatsira, edza Minetest 5.4.0 RC1, kurondedzera matambudziko anogona kuitika anogona kudaro woita yekupedzisira vhezheni iri nani ...
Mamwe ruzivo nekutora - Minetest yepamutemo webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Minetest 5.4.0: kuburitswa nenhau dzevadi veMODs